मन्दिरको हरेक टुडालमा किन कुदिन्छ अस्लिल यौनजन्य कला ? यस्तो छ रहस्य - सबैको कौतुहलताको जवाफ पढ्नुहोस -
मन्दिरको हरेक टुडालमा किन कुदिन्छ अस्लिल यौनजन्य कला ? यस्तो छ रहस्य – सबैको कौतुहलताको जवाफ पढ्नुहोस
यौनको यो स्वच्छन्दताले देशनै यौनकुञ्ज जस्तो बन्न पुगेपछि दरबार भित्रै समाजलाई यसबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने छलफल शुरु भएछ ।लामै छलफल र सोचपछि यसलाई लुकाएर र दबाएर समाधान हुँदैन । यसको सार्वजनिक प्रदर्शन र प्रचार गर्नुपर्छ, जसबाट मानिसमा मानसिक बित्रिष्ण उत्पन्न हुन्छ र यो आवश्यकीय र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्केछ । अनि काठमा, माटोमा, धातुमा जे–जेमा हुन्छ यौनबद्धक आकृतिहरु सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्नु भन्ने आदेश भएछ ।
१ – धेरै वर्ष अघिका राजा शिवदेव भन्नेले नरबलि दिने चलन चलाएछन् । प्रत्येक वर्ष चैत्र १२ गतेका दिन वत्सलादेवीलाई मानिसको बलि चढाउन थाले । यो मानवबलिको परम्पराले समाजमा ठुलै हाहाकार भयो ।हरेक वर्ष चैत्र १२ गते एउटा मान्छे काटिने कुरा निश्चित थियो । अब अर्को वर्ष को काटिने होला भनेर मानिसहरु थरथरि हुन थाले । शरीरमा कुनै खोट नभएको, चोट नभएको, हट्टाकट्टा युवकलाई ल्याएर बलि दिने गरिएछ ।
बलि आतङकका कारण शरीरमा चोट पार्नकालागि जानीजानी एक टोल र अर्को टोलका बिचमा ढुङगा हानाहान गर्ने र एक अर्काका टाउका फुटाउने गर्न थालेछन् । पछि बलि दिनकालागि देशैभरि चोट नलागेको, खत नभएको एउटैपनि युवक नभेटिएपछि राजाले ‘खते’ बलिको प्रारम्भ गरेछन । जसको शरीरमा धेरै खत छ त्यसैलाई बली दिने परम्परा थालिएपछि ढुङगा हान्ने परम्परा बन्द भएछ ।तर चैत लाग्दैदेखि राज्यमा पुरुषहरु घट्न थाल्दारहेछन । नरबलिका डरले पुरुषहरु भाग्न थालेपछि राजाका सेनाहरुले बलि खोज्ने क्रममाः घरघरमा जाने र महिलाहरुलाई हातपात गरेछन । बलिमा परिने डरले घर छोडेर हिडेका कैयौं पुरुषहरु नफर्केपछि महिलाहरुको संख्या राज्यमा बढेर गएछ ।पुरुषको कमीलाई पूर्ती गर्न बचेखुचेका बुढा र राजाका सेनाहरुले घरघरमा गएर महिलाहरुसँग अनेक आसनका साथ संभोग गर्न थालेछन् । परम्परा जस्तै बन्दै गएको त्यहि संभोगशैली बिस्तारै टुडालहरुमा देखिन थालेको भनिन्छ ।
कुमारी रहनु अत्योनी हुनु भनेको ज्यान जानु सरह भएपछि बलिमा पर्ने डरले सानै उमेरमा बिहे गरिदिने तथा कुमारी केटीहरुलाई यौनकार्यमा संलग्न गराउन थालिएछ । अभिभावकहरुले नै छोरीको कुमारीत्व च्युत गराउने वातावरण बनाइदिन थालेपछि औपचारिक रुपमै भित्रभित्रै देशैभरि यौनप्रथा बाक्लिएर गएछ । कुमारीत्वच्युत गराउन छुट गरिएको यौनप्रथा बाक्लिएर गएछ । कुमारीत्वच्युत गराउन छुट गरिएको यौनप्रथा बिस्तारै अराजक हुँदै गएर विवाहित महिलाहरु समेत पुरुषसँग अनेकौं ‘यौनासनारुढ’ हुन थालेछन ।समाजमा फैलिएको त्यो नाङगोपनलाई कलाकारहरुले चित्र र मूर्तीहरुमा कप्न थालेछन र बिस्तारै त्यसलाई सार्वजनिक मन्दिर र टुडालहरुमा सजाएछन । आखिर जसको मत जे भए पनि यस्ता चित्रलाई पनि त्यतिबेलाको समाजले सहजै स्वीकारेको थियो
Previous आज शिवरात्रीको दिन यी स्थानहरुमा सवारी चलाउन नपाइने ? जानीराखौं
Next दुखत खबर: राजधानीमै बाघले ६ वर्षका बालक खायो !